एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्बाङ र खड्का मध्ये एकको सम्भावना ! | Hamro Khelkud
एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेम्बाङ र खड्का मध्ये एकको सम्भावना !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनको विषयले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाउने भएको छ । बिहीबार बस्ने एन्फा केन्द्रिय समितिको तेस्रो बैठकले लामो समयदेखि अड्किएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन पूरा गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
विरवहादुर खड्का र पंकज नेम्बाङ
वैशाख २२ गतेको केन्द्रिय समिति चयन यता एन्फाको दुई वटा कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको एजेन्डाले प्रवेश पाएको थिएन । यसपटकको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका विषयमा छलफल हुने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले हाम्रो खेलकुदलाई जानकारी दिए । एन्फाले केन्द्रिय समिति बैठक डाक्दा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनको विषय एजेन्डामा समावेश थिएन ।
निर्वाचित १७ सदस्यीय केन्द्रिय समिति पदाधिकारी र सदस्यमध्ये कोहीले पनि एजेन्डा थप्न प्रावधान अनुसार यसपटक दुई वटा एजेन्डा थप भएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । ‘एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन र राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकका विषयमा दुई एजेन्डा थप भएका छन्’ , राईले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षको एजेन्डा उपाध्यक्ष पंकज नेम्बाङ र प्रशिक्षकको एजेन्डा अर्का उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले थप्नुभएको हो ।’
विधानत वरिष्ठ उपाध्यक्ष एन्फा कार्यसमितिको दोस्रो वरियतामा हुन्छन् । वैशाख २२ गते सम्पन्न निर्वाचन लगत्तै बसकेको बैठक र साउन अन्त्यमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको एजेन्डाले प्रवेश पाएको थिएन ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रिय समितिको सर्वसम्मति वा बहुमतका आधारमा चयन हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । एन्फाका ४ उपाध्यक्षमध्येबाट एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् । एन्फा उपाध्यक्षमा पंकज नेम्बाङ, कृष्ण थापा, वीरबहादुर खड्का र उपेन्द्रमान सिंह निर्वाचित भएका थिए । त्यसमध्ये नेम्बाङ र खड्काले वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि दाबी गरिहेका छन् ।
सुरुमा दाबी गरेपनि अर्का उपाध्यक्ष थापाले भने दाबी छाडेको श्रोतले बतायो । नेम्बाङले निर्वाचित उपाध्यक्ष मध्ये बढी मत ल्याएकोले आफु हुनु पर्ने दाबी गरेको बताइएको छ । त्यस्तै अर्को उपाध्यक्ष खड्काले भने आफु यसअघि नै उपाध्यक्ष भइसकेकोले वरिष्ठ पाउनुपर्ने दाबी गरेको श्रोतले बतायो ।
यद्यपी चुनावमा जितेका उपाध्यक्षमध्य सर्वाधिक कम मत हासिल गरेका खड्काको दावेदारी कमजोर रहने अनुमान गरिएको छ । नेम्वाङले चुनावमा ६१ मत ल्याएका थिए भने खड्काले ३९ मत ल्याएर उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका विराटजंग शाहीले ३३ मत ल्याएर खड्कालाई चुनौती दिएका थिए ।
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्ने वैधानिक व्यवस्था छ । एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले विदेश यात्राका क्रममा सुरुमा चार उपाध्यक्ष मध्ये एकलाई कार्यवाहक दिने गरेका थिए । पछिल्ला केहि विदेश यात्रामा भने उनले कुनै पनि उपाध्यक्षलाई कार्यवहाक दिएका छैनन् ।
प्रावधिक समितिको संंयोजक आफु भएपनि एन्फाले विना सल्लाह विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने तयारी गरेकाले उपाध्यक्ष थापाले अलग एजेन्डा राखेको बुझिएको छ । यसअघि एन्फाले विविधसहित १० वटा एजेन्डा तय गरेको थियो । अब छलफलका लागि १२ एजेन्डा पुगेका छन् ।